Inona avy no Mety Hahazoana ny Aretina Ebola Eto Madagasikara ary efa Misy Ve Rafitra Ara-Pahasalamana Iatrehana Izany ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2014 10:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Swahili, Español, Français
Ramanavy eto Madagasikara – valam-bahoaka wikipédia
Efa mihamitoetra ho vaindohan-draharaha eo amin'ny sehatra iraisampirenena hatrany ny valan'aretina Ebola. Mitombo haingana dia haingana ny isan'ny marary any amin'ny firenena telo efa misy azy any Afrika andrefana : Ginea, Liberia ary Sierra Leone. Nanamarika ny Firenena Mikambana fa efa namono olona mihoatra ny 2 400 amin'ny 4 784 efa tratrany (tamin'ny 15/09) ity fanaviana mibabarà ratsy indrindra teo amin'ny tantara ity. Nandany ny drafi-pandaminana laharana faha-2177 hiatrehana ilay krizy ara-pahasalamana ny vaomieran'ny fandriampahaleman'ny Firenena Mikambana. Ny 18 septambra, firenena 131 no nandany ny didy mankatoa ny “hagoavan'ny valan'aretina Ebola mihoampampana eto Afrika” sy ny fananganana iraka manokana antsoina hoe UNMEER (United Nations Mission for Ebola Emergency Response = Iraky ny Firenena Mikambana Hamonjy ny Voina Ateraky ny Ebola ). Nanambara ny handefasana miaramila etazoniana 3000 ny filohan'i Etazonia Barack Obama satria heveriny fa misavoana mihitsy ny fitombon'ilay krizy.
Manahy ny amin'ny mety hianahan'ny valan'aretina ho tonga any amin-dry zareo ny firenena afrikana hafa nefa tsy manana fitaovana ara-pahasalamana hiatrehana izany akory. Nisy fanadihadiana nanamafy fa misy firenena afrikana 15 ahiana ho mora tratrany satria mitovitovy toetra ara-pahasalamana amin'ireo firenena efa tratrany. Ao anatin'izany i Madagasikara izay vao nahita sambo iray avy any Libéria sy ahiana hitondra ny tsimok'aretina Ebola niantsona tao amin'ny seranantsambon'i Toamasina. Nisy fivoriana maika natao teto Antananarivo tamin'ny 5 aogositra ahafahana mandinika akaiky ny fepetra tokony horaisina.
Tsy voaaron'ny loza tahaka itony ny firenena tahaka ny antsika, na dia lavidaviatra antsika ihany aza ny faritra iitaran'ny viriosy
hoy i Philémon Tafangy, seketera jeneralin'ny Minisiteran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Vao nanamafy indrindra anefa ny Praiminisitra Kolo Roger fa efa vonona amin'ny fiatrehana amin'izany tranga izany ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny fametrahana drafi-piatrehana ny tsy ampoizina eto an-toerana :
Ahitana ny tranga rehetra mety hisy sy ny fepetra (sy fitaovana) ilaina hiatrehana indrindra fa ny valan'aretina mahatratra ny rà tahaka ny aretina ateraky ny viriosin'ny Ebola.
Efitranon'ny hopitaly iray any Mandritsara, Madagasikara – CC BY 2.0
Raha jerena anefa dia tsy afaka ny hiatrika ny fianahan'ny aretina haingana dia haingana akory ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana eto Madagasikara. Nisafidy ny tsy hiraharaha ny fanairan'ny manampahaizana ara-tsiantifika ny praiminisitra fa manankina ny fitokisany any amin'ny fanarahamaso ny seranana sy ny seranam-piaramanidina, ary nanamarika fa voaaro amin'ny alalan'ny tsy fisian'ny zotram-piaramanidina mifandray mivantana any amin'ireo faritra efa tratran'ny tsimok'aretina ny faritra ara-pahasalamana malagasy. Nanantitra ny manampahaizana fa efa-mifindra amin'ny fomba samy hafa ny tsimok'aretina. Nisy tokoa fandinihana nivoaka vao haingana nanazava ny mety ho fielezan'ny aretina avy any amin'ny tontolon'ny biby mankany amin'ny olombelona: mety hitondra ny aretina tsy ahitana izay fisehon'aretina izay akory ny fanihy (sy ny ramanavy) mpihinana voankazo, afa-mifindra monina sy mamindra aretina amin'ny biby hafa, amin'ny gidro na amin'ny biby mpikiky hafa ohatra. Misy anefa ny mihinana gidro any ambanivohitra any. Raha tsy voatery hahazoana ny aretina Ebola ny fihinana azy, dia mety hahazoana ny aretina kosa ny eo am-pikarakarana ilay hena manta.
Miahiahy amin'ny fahafahan'ny firenena miatrika hanoherana ny mety ho fahatongavan'ny Ebola eto Madagasikara i Léa Ratsiazo avy eto Antananarivo raha mijery ny zava-nitranga vao haingana tao amin'ny hopitaly iray eto an-drenivohitra :
Aleo dia hinoana izay lazainy fa tamin'io toerana nanaovany ny fanambarana an-gazety io indrindra, nisy ekipam-bahiny mpandidy miasa ao amin'ny asa fanasoavam-bahoaka nanohitra izay nolazainy tsy nahy. Ekipa iray ahitana mpandidy 11 manao asam-panasoavana mitety firenena maro ka ao anatin'izany i Madagasikara. Manao fandidiana maimaim-poana amin'ireo marary izay mila izany any amin'ny firenena tsidihiny amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny hopitaly ao an-toerana ry zareo ireo. Nofidiana hanaovana izany fiaraha-miasa izany ny hopitaly HJRA eto Antananarivo, izay ivon-toeram-pitsaboana lehibe indrindra eto Madagasikara saingy noadinoin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny HJRA izany fiaraha-miasa izany. Vokany : tsy nisy ny marary tonga. Nisy ihany marary roa ao amin'ny HJRA nodidiana fa tsy 25 isan'andro araka ny efa niomanana. Tezitra ry zareo ka nolazainy mazava tsara fa tsy hanao vakansy no hahatongavany fa hanampy ny hafa, ny zavatra kely indrindra tokony natao dia ny nanao ny filazana sy nanentana ny olona, ankoatra izany dia tsy azon-dry zareo ny antony iantohan'ny marary ny fanafody sy ny fitaovana rehetra handidiana. Voamariky ry zareo ihany koa fa tsy manana ny fitaovana fototra hanaovana fandidiana ara-pahasalamana tsotra indrindra ny HJRA
Efa misy izany ny drafi-piatrehana ny tsy ampoizina eto Madagasikara fa ho hita eo raha voapetraka any amin'ny toerana misy azy ny fitaovana ahafahana mampiasa azy.